Achọpụtara Malware maka Mac dabere na Microsoft Word macros | Esi m mac
Anyị na-aga n'ihu na akụkọ a nke malware na kọmputa Apple ma n'oge a ọ dị ka achọpụtara malware nwere isi nke Microsoft Word macros. Nke a pụtara na anyị na-emekọ "Windows based" malware ported to Mac, ihe na-enye ntakịrị nsogbu dịka achọpụtara ọtụtụ nsogbu nke malware.
N'ụzọ doro anya, ọ dịghị sistemụ arụmọrụ nwere ike ịdaba, mana na macOS enwere oge ole na ole mgbe achọtara malware, ọtụtụ na-abanye n'oge na-adịbeghị anya. Nke a ọ pụtara na m ga-etinye antivirus? Mba, n'ụkpụrụ ọ bụ ihe dị ịtụnanya na anyị nwere ike ibunye Mac ahụ, mana n'ihe banyere nke a malware ọ na-agụ ya na akụkọ ihe mere eme nchọgharị, nyochaa igwefoto weebụ ma ọ bụ nweta akara ngosi okwuntughe.
Dị ka n'oge ndị gara aga, ọ kacha mma ịghara ịnabata ozi ịntanetị amaghị, ịnyagharịa ebe nchekwa, kpachara anya na ihe anyị na-ebudata na karịa ezi uche niile. O siri ike na anyị ga - emetụta ụdị malware a, mana anyị nwere ọtụtụ ohere karịa ebe ndị a na-abawanye ọtụtụ afọ na nke a, e mepụtara ya na asụsụ mmemme Python, yana Anyị nwere ike ịchọta ya na akwụkwọ Okwu akpọrọ "US Allies and Rivals Digest Trump's Victory - Carnegie Endowment for International Peace" nkekọrịta netwọkụ mmekọrịta ...
Malware a chọrọ ka onye ọrụ ghara ịgba ọsọ, ọ chọrọ onye ọrụ ka ịnakwere ya ma ọ bụ ebe a ka anyị ga-akpachara anya, ebe ọ bụrụ na anyị anabataghị macros ọ gaghị enwe ike ịnweta usoro ahụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ihe dị mkpa ugbu a bụ na ụlọ ọrụ nchekwa dịka Mmekọrịta, na-ahụ maka ịchọta malware a na-elebara anya na a na - achọpụta ngwa ngwa ọ bụla na - enweghị atụ na sistemụ dịka macOS.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac OS X » Achọpụtara Microsoft Word macro malware
Kedu ka o si kwe omume na a ka nwere mbipụta ndị na-akwadoghị ntinye nke antivirus na ngọpụ na Mac bụ obere usoro mwakpo?
Biko melite esemokwu a n'ihi na nke a bụ ihe abanyela n'akụkọ ihe mere eme. Ndị omekome maara na ahịa Apple etoola ma ha nwekwara obere asọmpi n'ịmepụta mwakpo n'elu ikpo okwu a, nke mere na ọ baara ha uru nke ukwuu.
Ọ na-esiwanye ike ịchọta egwu niile, nke na-emetụta sistemụ arụmọrụ niile, site na ngwa ma ọ bụ ogbugba ndu nke ha niile na-ahụkarị.
Ya mere, ọ na-ukwuu tụrụ aro ka nwere nile di iche iche nke nchebe, ọ bụghị naanị antivirus.
Apple Pay na United States na-aga n’ihu ịgbasa ọnụọgụ nke ụlọ akụ na ụlọ ọrụ akwụmụgwọ akwadoro